ကချင်တွေ ညံ့ဖျင်းမှု indicator တခုက ငွေကြေး အလိမ်ခံရခြင်းပါဘဲ။ ငွေယားလေး ရှိရင် ကိုယ့်ဟာကိုယ် တိုးပွားအောင် မလုပ်ကြဘဲ.... ကယ်တင်ရှင်တွေက ဆပွားပေးမှာ မြင်ယောင်ပြီး သူများကို အပ်ထားတတ်ကြလေတယ်လေ။ ပထမဦးဆုံး သတိထားမိတာက သက္ကရာဇ် ၂၀၀၀ ခုနှစ် ၀န်းကျင်မှာ မြစ်ကြီးနားမြို့ မှာ သစ်လုပ်ငန်းကြောင့် ငွေယားရွှင်နေချိန်မှာ အတိုး ၂၀%. ပေးမယ် 10% ပေးမယ် ဆိုပြီး လုပ်ငန်းရှယ်ယာ ခေါ်သလိုလိုပုံစံနဲ့ သိမ်းကြုံးယူသွားလိုက်တာ ဘ၀ပျက်တဲ့ မိသားစု ထောင်ချီ သောင်းချီ။ ၂၀၀၄ ခုနှစ်လောက်မှာ နောက်တခါ ဖြစ်ပြန်တော့ မြစ်ကြီးနားမြို့ ယုဇနနဲ့ မြေမြင့်၊ မြို့သစ်ရပ်ကွက်တွေမှာ တအိမ်ခြားစီလောက် အမှုဖြစ်ပြီး ငိုကြ ရီကြ နဲ့ နောက်ဆုံး KIO ဌာနချုပ်ဖြစ်တဲ့ လိုင်ဇာ အထိ သွားရှင်းကြ။ အံ့သြစရာကောင်းတာက အဲဒီကဏ္ဍမှာ လုပ်စားသူကဘဲ လိုင်ဇာမှာ ဈေးကွက်ချဲ့ထွင်နိုင်ပြီး လိုင်ဇာက KIO/A ခေါင်းဆောင်မိသားစုတွေသာမက ကက်သလစ်က ကျောင်းထိုင်ဘုန်းကြီးတောင် ပါသွားသေး။ နောက်တခါ ဘလဲ ဆိုပြီး ထွက်လာပြန်တယ်။ သိန်းရာချီ အရင်းထဲ့မှ အမြတ်ထွက်မယ် ဆိုတော့ကာ ကချင်ကျောက်လောပန်း၊ ရွှေလောပန်းတွေ အောကြပြန်တယ်။ ကိုတော့ နဲနဲ လျှာရှည်လိုက်တယ်။ ဘလဲ ကို သေချာဖတ်ကြည့်ရင် Be - Lair လို့ အသံထွက်နေတယ်နော်.. လို့.. ပလုံ ပလုံပေါ့။ Product ကို သယ်လာပြီး MLM နည်းနဲ့ ပြသနာ ပရပွ ဖြစ်စေတဲ့အထဲမှာ ဆေးဝါးနဲ့ ဓါတ်စာ လို့ပြောတဲ့ လုပ်ငန်းအမျိုးအစားတွေက ထိတ်ဆုံးကပေါ့။ ငွေစုငွေချေး လုပ်ငန်းနဲ့ အကြီးအကျယ် အောင်မြင်ပါတယ်ဆိုတဲ့ အသင်းတော်များရဲ့ ကျော်မကောင်း ကြားမကောင်း ဇာတ်လမ်းတွေလည်း သင်ခန်းစာ ယူစရာတွေ။ အရေးထဲ သိန်း ၂၀၀ ကံစမ်းမဲပေါက်လို့ သိန်း ၂၀ အရင်လွှဲပါ ဆိုတဲ့ စကားကြောင့် ဘဏ်ကနေ သိန်း ၂၀ လွှဲပေးလိုက်တဲ့ အမှုတော်ဆောင် တယောက်ရဲ့ ဇာတ်လမ်းကလည်း နားထောင်ရပြန်တယ်။ အခုနောက်ပိုင်း ရုံးကြတာက IGlobe နဲ့ ကွိုင်တွေ.. နဲ့ ရှုံးကြတယ်။ ရှုံးတဲ့ကိစ္စတွေကို ပြန်ကြည့်ရင်..... ဒီလုပ်ငန်းကို သယ်လာသူတွေက လူအများ ယုံကြည်စိတ်ချရတဲ့ သင်းအုပ်ဆရာ၊ လူမှုရေးလုပ်ငန်းသမားတွေ၊ သီလရှင်၊ စီးပွားရေးသမား၊ KIO စစ်ဗိုလ်ကတော်၊ စစ်ဗိုလ် သားသမီး တွေကို အရင် သိမ်းသွင်းလိုက်ပြီး အဲဒီသူတွေကို အရင် ပေးစားလိုက်တာပါဘဲ။ သူတို့တတွေ စားရပြီ ဆိုတာနဲ့ အလုပ်လုပ်တော့တယ်။ ဒါနဲ့ အမျိုးတူသူ အုပ်စုလိုက် ပလုံ ပလုံပေါ့။ တချို့ အသင်းတော်တွေဆိုရင် မိမိ အသင်းတော်ထဲက ငွေယား လက်ထဲမှာ ရှိသူတွေထဲက အများစု ပါကုန်ရော။။ တချို့ ကျတော့လည်း ဒီလုပ်ငန်းမှာ တခါ ရှုံးပြီးပေမဲ့ နောက်ထပ် လုပ်ငန်းတွေမှာ ထပ်ခါ ထပ်ခါ ပစ်ထဲ့ရင်း ထပ်ခါ ထပ်ခါ ရှုံးနေခြင်းဖြင့် အရှုံးခံနေကြတယ်။ ထူးဆန်းတာက IDP Camp တွေမှာတောင် ငွေး တသိန်းစီ ၀ိုင်းစု ခိုင်းပြီး အုပ်စုပိုင် ရှယ်ယာ ဆွဲတယ် ဆိုတဲ့ ပုံစံနဲ့ သိမ်းကြုံး ယူသွားရတာပါဘဲ။ IDP တွေမှာလည်း လောဘ နဲ့ဘဲလေ။ မစား မသောက် စုဆောင်းပြီး ထဲ့ကြတာပေါ့။ ၂၀၁၇ နိုဝင်ဘာလ ၂၅ ရက်နေ့မှာ ရှယ်ယာ ဖွင့်ပေးမယ် ဆိုပြီး ငုတ်တုတ်ထိုင်စောင့်နေတဲ့ လူသားတွေထဲမှာ.. မိမိရဲ့ အမှုတော်ဆောပင် ၂၅ နှစ်ပြည့် ငွေစင်ဂျူဗလီပွဲမှာ အသုံးပြုဖို့ ဆွေတော်မျိုးတော်များ စုဆောင်းလှူဒါန်းထားတဲ့ ငွေကို ဆုံးရှုံးသွားပါတယ် ဆိုတဲ့ ကက်သလစ် မယ်သီလ ပါပါတယ် ဆိုတာ သိရပြန်တော့လည်း .... ဘာဆက်ပြောရမှန်းမသိ။ ဆုံးရှုံးသူတွေထဲမှာ တခြားတိုင်းရင်းသားတွေက သိန်း ဆယ် ဂဏန်း လောက်သာ အောထာကြပြီး ကချင်တွေက ဘုရင့်နောင် ဖောင်ဖျက် အောထားသူတွေ များပြန်တယ်။ ခံရတဲ့ သူတွေက ကိုယ့်အရင်း ပြန်ရဖို့ သူများကိုပါ ကိုယ့် နွံထဲ ဆွဲသွင်းတာကို မြင်ရပြန်တော့ ... လောလောဆယ်တော့ ကချင်မနောပွဲက အိုးစည်ဗုံမောင်းတွေက "ထုံ၊ ထုံ၊ ထုံ" လို့များ အသံမြည်နေသလား လို့.... စဉ်းစားရင်း.. Good Morning Wunpawng Mungdan.!
Mlm နဲ့ Pyramid လောငျးကစားရယျဖုံဖုံ
ညဏျ နီ ညဏျနကျတှေ နဲ့ လိမျပှဲဆငျနှဲ
ငတုံးတှရေယျ မကျြရညျနဲ့ ရစေကျခစြမျး
Mlm နဲ့ Pyramid လောင်းကစားရယ်ဖုံဖုံ
ညဏ် နီ ညဏ်နက်တွေ နဲ့ လိမ်ပွဲဆင်နွဲ
ငတုံးတွေရယ် မျက်ရည်နဲ့ ရေစက်ချစမ်း
ယခုနှစ်အတွက် သတင်းစာတွင် အကြေငြာခံရဆုံး ဆု ကို ရရှိသွားသူက Jude Jude ( ခေါ် ) ဒေါ်သက်သက်မြိုင် ဖြစ်ပါတယ် ။
သတငျးစာတှငျ အကွငွောခံရဆုံး ဆု ကို
Jude Jude ( ချေါ ) ဒျေါသကျသကျမွိုငျ
တဈလ ၂၀-၃၀% အတိုးပေးမယျလို့
သိနျးသောငျးခြီ လကျခံထားပွီး မှ
အရငျး ပွနျထုတျဖို့ ခကျနလေို့
ငှရှေငျတှေ တဈယောကျပွီး တဈယောကျ
သတငျးစာကနေ ကွငွောပွီး တောငျးနရေတဲ့
သတင်းစာတွင် အကြေငြာခံရဆုံး ဆု ကို
Jude Jude ( ခေါ် ) ဒေါ်သက်သက်မြိုင်
တစ်လ ၂၀-၃၀% အတိုးပေးမယ်လို့
သိန်းသောင်းချီ လက်ခံထားပြီး မှ
အရင်း ပြန်ထုတ်ဖို့ ခက်နေလို့
ငွေရှင်တွေ တစ်ယောက်ပြီး တစ်ယောက်
သတင်းစာကနေ ကြေငြာပြီး တောင်းနေရတဲ့
420 နဲ့စွဲပြီး အာမခံရသွားလို့ ဇဝေဇဝါဖြစ်နေသူများကိုပြောချင်ပါတယ်...
420 နဲ့စှဲပွီး အာမခံရသှားလို့ ဇဝဇေဝါဖွဈနသေူမြားကိုပွောခငျြပါတယျ...
420 သညျ ပုံမှနျအားဖွငျ့ အာမခံ လုံးဝ မရပါ...
သို့ပမေယျ့ ဥပဒေ မှာက ခြှငျးခကျြတှရှေိပါတယျ...
အမြိုးသမီး၊ ကလေး စသညျဖွငျ့ အာမခံပေးလိုကျလို့ရတာတှရှေိပါတယျ...
အကယျြကို SS ပုံထဲမှာ သူနဲ့ပွောထားပါတယျ...
အဓိကက တရားသူကွီးက အာမခံကိစ်စ ဆုံးဖွတျတာပါတဲ့..
ဒီတော့ 420 နဲ့ ထပျခါထပျခါစှဲ ရငျ သူလဲ နောကျတိုးအမှုတှေ အတှကျ အာမခံ ရဖို့မသခြောတော့ပါဘူး...
ရသလောကျကို 420 နဲ့ ထပျခါထပျခါစှဲကွပါ...
ဒီအခြိနျတှဝေေ နရေငျ နောငျအခြိနျရမှာက နောငျတ တှပေါပဲလို့...
420 က အာမခံ ပေးကိုပေးရတယျ့ ပုဒျမလို့ မနျ့တှမှောပွောနလေို့ပါ...
ကနြျောလဲ ဥပဒေ ပိုငျးသိပျနားမလညျပါ...
ဒီတော့ အာမခံ မရတဲ့ ပုဒျမနဲ့ စှဲကွပါ...
420 သည် ပုံမှန်အားဖြင့် အာမခံ လုံးဝ မရပါ...
သို့ပေမယ့် ဥပဒေ မှာက ချွင်းချက်တွေရှိပါတယ်...
အမျိုးသမီး၊ ကလေး စသည်ဖြင့် အာမခံပေးလိုက်လို့ရတာတွေရှိပါတယ်...
အကျယ်ကို SS ပုံထဲမှာ သူနဲ့ပြောထားပါတယ်...
အဓိကက တရားသူကြီးက အာမခံကိစ္စ ဆုံးဖြတ်တာပါတဲ့..
ဒီတော့ 420 နဲ့ ထပ်ခါထပ်ခါစွဲ ရင် သူလဲ နောက်တိုးအမှုတွေ အတွက် အာမခံ ရဖို့မသေချာတော့ပါဘူး...
ရသလောက်ကို 420 နဲ့ ထပ်ခါထပ်ခါစွဲကြပါ...
ဒီအချိန်တွေဝေ နေရင် နောင်အချိန်ရမှာက နောင်တ တွေပါပဲလို့...
420 က အာမခံ ပေးကိုပေးရတယ့် ပုဒ်မလို့ မန့်တွေမှာပြောနေလို့ပါ...
ကျနော်လဲ ဥပဒေ ပိုင်းသိပ်နားမလည်ပါ...
ဒီတော့ အာမခံ မရတဲ့ ပုဒ်မနဲ့ စွဲကြပါ...
Jude Jude / Naing Lin Aung
Jude Jude လုပ်ငန်းစု ကြောင့် နစ်နာသူများ အတွက်
လူတွေ အလိမ်ထပ်မမိအောင် လို့ အများသိအောင် ၊
မီဒီယာများသိအောင် ၊ သက်ဆိုင်ရာက လူကြီးတွေထိသိအောင်
( အွန်လိုင်း သတင်း မီဒီယာများ ၊ Facebook Pages များ ၊
Followers များသော Celebrities များ လည်း
ဝိုင်းဝန်းကူညီဖြန့်ဝေပေးကြဖို့ အထူး မေတ္တာရပ်ခံပါရစေဗျာ )
( အစုစပ် လုပ်ငန်း မှာ ငွေထည့်ဝင်ရင်
တစ်လကို ၂၀-၃၀% အတိုးပေးမယ် ဆိုတဲ့
မက်လုံးပေး လူခေါ်ခဲ့တဲ့ Jude Jude လုပ်ငန်းစု ဟာ
လူ ပေါင်း ၁,၅၀၀ ခန့်ဆီက
သိန်းပေါင်း သောင်းချီ လက်ခံ ထားခဲ့ပါတယ် ။
တကယ်တမ်းမှာတော့ Jude Jude လုပ်ငန်းစုဟာ
အောင်မြင် ဖြစ်ထွန်းနေတဲ့ လုပ်ငန်းတွေ မဟုတ်ပဲ
ငွေ ထည့်ဝင်ထားသူတွေရဲ့ ထည့်ဝင်ငွေတွေကိုသာ
အတိုး အဖြစ် လှည့်ပတ်ပေးနေတယ်လို့
ယူဆရတဲ့ လုပ်ငန်း တစ်ခုဖြစ်နေပါတယ် ။
လစဉ် အမြတ် ၂၀-၃၀% ခွဲဝေပေးတာအပြင်
Project လို့ အမည်တပ်ပြီး
၂ ပတ်အတွင်း အတိုး များများရမယ်ဆိုပြီး
ငွေ ထပ်မံ ထည့်ဝင်ခိုင်းတာတွေလည်း လုပ်ခဲ့ပါတယ် ။
( ဒီမှာ သက်သေခံ Screenshots တွေ ရှိပါတယ်
>>> https://www.facebook.com/groups/judejudecase/permalink/132267717460914/ <<< )
အခုအခါ မှာတော့ အတိုးလည်း မှန်မှန်မပေးနိုင်
အချိန် အတော်ကြာပြီ ဖြစ်နေလို့
ငွေရှင်များက သတင်းစာကနေ ရှေ့နေနဲ့
ကြေငြာ သတိပေးစာများ ထုတ်နေခဲ့ရပါတယ် ။
( ဒီမှာ သတင်းစာ ကြော်ငြာတွေပါ
>>> https://www.facebook.com/groups/judejudecase/permalink/132428924111460/ <<< )
30.11.2017 နေ့လည်ကနေ ည အထိ မှာတော့
သူ ရုံးခန်းငှားခဲ့တဲ့ Sedona ကို
သွားရောက်ပြီး ပြဿနာကို ဖြေရှင်းဖို့ ကြိုးစားကြပေမယ့်
ကာယကံရှင် Jude Jude ( ဒေါ်သက်သက်မြိုင် ) ကို
တွေ့ခွင့်မရပဲ သူ့ ကိုယ်စားလှယ်လို့
အရင်က ပြောခဲ့တဲ့ ရွေမိုးစက် ဆိုသူကိုသာ
( ဒီ ဗီဒီယိုတွေက Sedona မှာ ဖြေရှင်းဖို့ ကြိုးစားနေပုံပါ >>> https://www.facebook.com/myatnoewai93/posts/1771161046517748 <<< )
Sedona မှာ ဖြစ်တဲ့ ဖြစ်စဉ်အကျဉ်းကို ဒီမှာ ဖတ်နိုင်ပါတယ်
https://www.facebook.com/groups/judejudecase/permalink/132771137410572/ . <<<
ကာယကံရှင် Jude Jude ( ဒေါ် သက်သက်မြိုင် ) ကိုတော့ ခုချိန်ထိ
သေချာ ဆက်သွယ်လို့ မရ ဖြစ်နေဆဲပဲ လို့ သိရပါတယ် ..
ဒီ Live Video အရတော့
ရန်ကင်း ရဲစခန်းမှာ ၄၂၀ နဲ့ အမှုဖွင့်ဖို့ ကြိုးစားနေပေမယ့်
ဖွင့်လို့ မရသေးဘူးလို့ သိရပါတယ်
>>> https://www.facebook.com/groups/judejudecase/permalink/132812187406467/ <<<
30.11.2017 ( 11:39 PM )
ဒီ ( https://www.facebook.com/groups/judejudecase/ ) မှာ
လုပ်ငန်းနဲ့ ပတ်သက်တွေ သတင်းတွေ ၊ ဆွေးနွေး အကြံပေးချက်တွေ ၊
နစ်နာသူတွေရဲ့ ရင်ဖွင့်သံတွေ အများကြီး ရှိနေပါတယ် ။
လာရောက် လေ့လာ ပြီး အကြံပေး အားပေး ပေးကြပါ ။
( လိမျနိုငျခြေ ရှိတဲ့ လုပျငနျးတှကေို စုံစမျး စဈဆေးဖျောထုတျတဲ့ )
အစိုးရ အဖှဲ့အစညျး တဈခုလောကျ အမွနျဖှဲ့ပွီး
မလှနျခငျ ၊ အဆုံးအရှုံးမမြားခငျ ထိမျးသိမျးတညျ့မတျနိုငျအောငျ ၊
အမြားပွညျသူကိုလညျး အသိပညာပေးနိုငျအောငျ လုပျကွပါတော့ဗြာ ။
မနသောတဲ့ သာမနျပွညျသူ အရပျသားတှကေ
စိတျရှုပျခံ ၊ ခေါငျးပူခံ ၊ အဆဲဆို အတိုကျခိုကျခံ ၊
အခြိနျကုနျ အလုပျပကျြခံပွီး လုပျနရေတာ ပငျပနျးလှနျးလှပါပွီ ။
Saxon Capital ( SCL )
J-Coin ( Myanmar Junwell ) စတာတှေ ကနေ
အခု Jude Jude လုပျငနျး ကိစ်စ အထိ မဖွဈခငျ ၊
မလှနျခငျမှာ ဝိုငျးသတိပေးနခေဲ့တဲ့ လူတှေ အမြားကွီးပါ ။
အစိုးရ အဖှဲ့အစညျး တဈခုခုကသာ မားမားမတျမတျရပျပွီး
သာမနျ ပွညျသူတှကေ အမြားကွီး ဝိုငျးကူပေးနိုငျမှာပါဗြာ ။
အခြိနျပေး အာရုံစိုကျပွီး ဦးဆောငျပေးပါ ။
လိမျနိုငျခြေ ( ဝငျလုပျတဲ့လူတှကေ ရိုးသားရငျတောငျ
လုပျငနျး စနဈအရကို လိမျဆငျ ဖွဈသှားနိုငျခြေ ) ၊
လူမြားစု ဆုံးရှုံးနိုငျခြေ အလားအလာမြားနတေဲ့ လုပျငနျးတှေ
လကျရှိမှာကို ၄-၅ ခု လောကျ ရှိနပေါသေးတယျ ။
နာမညျ တပျပွောရငျ ၆၆-ဃ ကလညျး ကွောကျနရေသေးတယျ ။
မတတျနိုငျဘူး ။ Risk ယူပွီး ပွောရမှာပဲ ။
ဒီ လုပျငနျးတှေ ဟာ အထူး သတိထားသငျ့တဲ့ အနအေထားမှာရှိပါတယျ ။
မလုပျရသေးရငျ ဝေးဝေးက ရှောငျပါ ။
လုပျနရေငျ ရပျပါ ။ ငှပွေနျထုတျနိုငျအောငျ ကွိုးစားပါ ။
1. S-coin ( CoinSpace )
3. IGA ( iGloabalAds )
4. First Coin
Admin @ AntiMLM
MLM Companies မြားကွောငျ့ နဈနာခဲ့သူမြား နှငျ့ MLM စနဈကို ဆနျ့ကငျြသူမြား
#MLM #Antimlm #CryptocurrencyScams
( လိမ်နိုင်ချေ ရှိတဲ့ လုပ်ငန်းတွေကို စုံစမ်း စစ်ဆေးဖော်ထုတ်တဲ့ )
အစိုးရ အဖွဲ့အစည်း တစ်ခုလောက် အမြန်ဖွဲ့ပြီး
မလွန်ခင် ၊ အဆုံးအရှုံးမများခင် ထိမ်းသိမ်းတည့်မတ်နိုင်အောင် ၊
အများပြည်သူကိုလည်း အသိပညာပေးနိုင်အောင် လုပ်ကြပါတော့ဗျာ ။
မနေသာတဲ့ သာမန်ပြည်သူ အရပ်သားတွေက
စိတ်ရှုပ်ခံ ၊ ခေါင်းပူခံ ၊ အဆဲဆို အတိုက်ခိုက်ခံ ၊
အချိန်ကုန် အလုပ်ပျက်ခံပြီး လုပ်နေရတာ ပင်ပန်းလွန်းလှပါပြီ ။
J-Coin ( Myanmar Junwell ) စတာတွေ ကနေ
အခု Jude Jude လုပ်ငန်း ကိစ္စ အထိ မဖြစ်ခင် ၊
မလွန်ခင်မှာ ဝိုင်းသတိပေးနေခဲ့တဲ့ လူတွေ အများကြီးပါ ။
အစိုးရ အဖွဲ့အစည်း တစ်ခုခုကသာ မားမားမတ်မတ်ရပ်ပြီး
သာမန် ပြည်သူတွေက အများကြီး ဝိုင်းကူပေးနိုင်မှာပါဗျာ ။
အချိန်ပေး အာရုံစိုက်ပြီး ဦးဆောင်ပေးပါ ။
လိမ်နိုင်ချေ ( ဝင်လုပ်တဲ့လူတွေက ရိုးသားရင်တောင်
လုပ်ငန်း စနစ်အရကို လိမ်ဆင် ဖြစ်သွားနိုင်ချေ ) ၊
လူများစု ဆုံးရှုံးနိုင်ချေ အလားအလာများနေတဲ့ လုပ်ငန်းတွေ
လက်ရှိမှာကို ၄-၅ ခု လောက် ရှိနေပါသေးတယ် ။
နာမည် တပ်ပြောရင် ၆၆-ဃ ကလည်း ကြောက်နေရသေးတယ် ။
မတတ်နိုင်ဘူး ။ Risk ယူပြီး ပြောရမှာပဲ ။
ဒီ လုပ်ငန်းတွေ ဟာ အထူး သတိထားသင့်တဲ့ အနေအထားမှာရှိပါတယ် ။
မလုပ်ရသေးရင် ဝေးဝေးက ရှောင်ပါ ။
လုပ်နေရင် ရပ်ပါ ။ ငွေပြန်ထုတ်နိုင်အောင် ကြိုးစားပါ ။
မိတ်ဆွေတစ်ယောက် အကြံပေးတာပါ ။
မိတျဆှတေဈယောကျ အကွံပေးတာပါ ။
Jude Jude ကို ရနျကငျးမှာ အမှုဖှငျ့လို့မရလို့ စိတျမပကျြပါနဲ့ ။
ကိုယျ နထေိုငျတဲ့ မွို့နယျကနေ ပွနျပွီး အမှုဖှငျ့လညျး ရနိုငျပါတယျ ။
၄ ယောကျ တဈဖှဲ့စီလောကျ မွို့နယျ အလိုကျ
လူစုပွီး အမှုဖှငျ့နိုငျတာ ပို ထိရောကျနိုငျပါတယျ ။
( အမှုတှေ ခှဲပွီး မြားမြား တကျသှားရငျ
သကျဆိုငျရာက ပိုပွီးလညျး သတိထားမိအောငျပါတဲ့ )
ဒီတော့ ဒီနေ့ Sedona မှာ တှခေဲ့တဲ့ ငှရှေငျတှေ အခငျြးခငျြး
နာမညျနဲ့ ဆကျသှယျရနျ ဖုနျးနံပါတျတှမှေတျပွီး
သခြော ခြိတျဆကျထားကွပါ ။
ဒါမှ ပွနျစုလို့ရမှာပါ ။
ကြှနျတေျာ့ အသိ တဈယောကျက သူ့ ရှနေ့အေဖှဲ့နဲ့ ကူညီမယျ ။
ငှကေုနျကွေးကြ မမြားအောငျ ကူညီပေးမယျလို့ ပွောထားတာရှိပါတယျ ။
စတာတှေ ပို့ထားပေးပါ ။
ကြှနျတျော ရသလောကျကို ပွနျခြိတျပေးပါ့မယျ ။
ဖွဈနိုငျရငျ ဒီ အောကျမှာ ပျေါတငျ ကှနျးမနျ့ ပေးပေးပါ ။
အညှိုးခံပွီး ပျေါတငျ တိုကျပေးနရေတာ ။
ခငျဗြားတို့လညျး ပျေါတငျတိုကျမှ လူစုလို့ လှယျမှာပါ ။
မဟုတျရငျ ပွနျ့ကြဲနလေိမျ့မယျဗြ ။
ကြှနျတျော ဒီည ၂ နာရီထိ စောငျ့ပွီး လူစုပေးမယျ ။
မနကျဖွနျ နလေ့ညျကြျောလောကျကရြငျ လညျး
တဈခုခု ပွနျပွောပေးပါမယျ ။
Jude Jude ကို ရန်ကင်းမှာ အမှုဖွင့်လို့မရလို့ စိတ်မပျက်ပါနဲ့ ။
ကိုယ် နေထိုင်တဲ့ မြို့နယ်ကနေ ပြန်ပြီး အမှုဖွင့်လည်း ရနိုင်ပါတယ် ။
၄ ယောက် တစ်ဖွဲ့စီလောက် မြို့နယ် အလိုက်
လူစုပြီး အမှုဖွင့်နိုင်တာ ပို ထိရောက်နိုင်ပါတယ် ။
( အမှုတွေ ခွဲပြီး များများ တက်သွားရင်
သက်ဆိုင်ရာက ပိုပြီးလည်း သတိထားမိအောင်ပါတဲ့ )
ဒီတော့ ဒီနေ့ Sedona မှာ တွေ့ခဲ့တဲ့ ငွေရှင်တွေ အချင်းချင်း
နာမည်နဲ့ ဆက်သွယ်ရန် ဖုန်းနံပါတ်တွေမှတ်ပြီး
သေချာ ချိတ်ဆက်ထားကြပါ ။
ဒါမှ ပြန်စုလို့ရမှာပါ ။
ကျွန်တော့် အသိ တစ်ယောက်က သူ့ ရှေ့နေအဖွဲ့နဲ့ ကူညီမယ် ။
ငွေကုန်ကြေးကျ မများအောင် ကူညီပေးမယ်လို့ ပြောထားတာရှိပါတယ် ။
စတာတွေ ပို့ထားပေးပါ ။
ကျွန်တော် ရသလောက်ကို ပြန်ချိတ်ပေးပါ့မယ် ။
ဖြစ်နိုင်ရင် ဒီ အောက်မှာ ပေါ်တင် ကွန်းမန့် ပေးပေးပါ ။
အညှိုးခံပြီး ပေါ်တင် တိုက်ပေးနေရတာ ။
ခင်ဗျားတို့လည်း ပေါ်တင်တိုက်မှ လူစုလို့ လွယ်မှာပါ ။
မဟုတ်ရင် ပြန့်ကျဲနေလိမ့်မယ်ဗျ ။
ကျွန်တော် ဒီည ၂ နာရီထိ စောင့်ပြီး လူစုပေးမယ် ။
မနက်ဖြန် နေ့လည်ကျော်လောက်ကျရင် လည်း
တစ်ခုခု ပြန်ပြောပေးပါမယ် ။
ပညာသားပါတဲ့ MLM မပြောနဲ့ ဒီလိုဗြောင်ကြီး လိမ်သွားတဲ့ဟာတွေတောင် ဘာမှမလုပ်နိုင်တဲ့နိုင်ငံ…
ပညာသားပါတဲ့ MLM မပွောနဲ့ ဒီလိုဗွောငျကွီး လိမျသှားတဲ့ဟာတှတေောငျ ဘာမှမလုပျနိုငျတဲ့နိုငျငံ…
ဒီတော့ MLM တှေ နိုငျငံတျောခနျးမမှာလုပျ အလှူရှငျနရောထိုငျ ဂုဏျပွုလကျမှတျတှရေနတောဆနျးသလား?
ဒီကွားထဲ သောကျရူးတှကေ အလိမျခံရသူကို အပွဈတငျရတာနဲ့…
သတိပေးထောကျပွနသေူတှကေို အစိုးရအကူအညီနဲ့မလုပျလို့ဆိုပွီး သောကျပွဈတငျကွတာနဲ့…
လိမျနပေါတယျလို့ နာမညျတပျပွီး သခြောပွောကွညျ့ပါလား? ဟိုက တရားစှဲလို့ အစိုးရကထောငျထဲပို့လိမျမယျ…
အဲ့ဒါတှတေရားဝငျလုပျကိုငျနတောလား လုပျကိုငျခှငျ့ပွုထားလား လုပျကိုငျခှငျ့ရှိသလား သှားမေးကွညျ့…
No လို့ပဲ အဖွရေမယျ
အရေးယူလား တားလားဆိုတော့လညျး No ပဲ…
ဒီကွားထဲ ကိုယျတှကေ ၆၆-ဃ ကွောကျတာနဲ့ သတိထားပွောနရေတယျ…
SCL တုနျးကဆို ကုမ်မဏီလိုငျစငျပွပွပွီး တနိုငျငံလုံးပတျလိမျနတော သိလညျးသိတယျ သတိလညျးပေးတယျ… ကုမ်မဏီလိုငျစငျကွီး ဘာကွောငျ့ထုတျပေးရသလဲ? ငှကွေေးကိစ်စတှေ လုပျခှငျ့ရှိလို့လား?
ဘယျလောကျအျောအျော… လာလြှောကျလို့ စညျးကမျးခကျြနဲ့ကိုကျညီရငျထုတျပေးတယျ။ ငှကွေေးကိစ်စလုပျကိုငျဆောငျရှကျခှငျ့မရှိဘူ ခှငျ့ပွုမထားဘူး။ ဒါပဲ…
ဒီတော့ MLM တွေ နိုင်ငံတော်ခန်းမမှာလုပ် အလှူရှင်နေရာထိုင် ဂုဏ်ပြုလက်မှတ်တွေရနေတာဆန်းသလား?
ဒီကြားထဲ သောက်ရူးတွေက အလိမ်ခံရသူကို အပြစ်တင်ရတာနဲ့…
သတိပေးထောက်ပြနေသူတွေကို အစိုးရအကူအညီနဲ့မလုပ်လို့ဆိုပြီး သောက်ပြစ်တင်ကြတာနဲ့…
လိမ်နေပါတယ်လို့ နာမည်တပ်ပြီး သေချာပြောကြည့်ပါလား? ဟိုက တရားစွဲလို့ အစိုးရကထောင်ထဲပို့လိမ်မယ်…
အဲ့ဒါတွေတရားဝင်လုပ်ကိုင်နေတာလား လုပ်ကိုင်ခွင့်ပြုထားလား လုပ်ကိုင်ခွင့်ရှိသလား သွားမေးကြည့်…
No လို့ပဲ အဖြေရမယ်
အရေးယူလား တားလားဆိုတော့လည်း No ပဲ…
ဒီကြားထဲ ကိုယ်တွေက ၆၆-ဃ ကြောက်တာနဲ့ သတိထားပြောနေရတယ်…
SCL တုန်းကဆို ကုမ္မဏီလိုင်စင်ပြပြပြီး တနိုင်ငံလုံးပတ်လိမ်နေတာ သိလည်းသိတယ် သတိလည်းပေးတယ်… ကုမ္မဏီလိုင်စင်ကြီး ဘာကြောင့်ထုတ်ပေးရသလဲ? ငွေကြေးကိစ္စတွေ လုပ်ခွင့်ရှိလို့လား?
ဘယ်လောက်အော်အော်… လာလျှောက်လို့ စည်းကမ်းချက်နဲ့ကိုက်ညီရင်ထုတ်ပေးတယ်။ ငွေကြေးကိစ္စလုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်ခွင့်မရှိဘူ ခွင့်ပြုမထားဘူး။ ဒါပဲ…
Htun Htun Oo / Jude Jude
အိမျအဝငျအထှကျကို တဈလကြျောလောကျစောငျ့ကွညျ့ခဲ့ပွီး ပွဿနာတှတေကျတဲ့ဒီနမှေ့ာတော့ ထူးထူးခွားပဲ
သူတို့မိသားစုရဲ့ Alphad,Wish,Harrier2014,Hummer စတဲ့ကားတှအေကုနျလုံးပြောကျခွငျးမလှပြောကျနပေါတယျ
ငှလေကျခံတဲ့အခြိနျမှာရှိခဲ့ကွတဲ့ VolunteerမြားAdminမြားကိုပါအခုခကျြခငျြးရှာဖှတေိုငျခကျြဖှငျ့ကွပါ 🤨🤨🤨
JUDE JUDE နာမညျနှငျ့ဖှငျ့ထားတဲ့ဆိုငျတှအေားလုံးကိုလဲဒီနပေိ့တျထားလိုကျပါပွီ
အိမ်အဝင်အထွက်ကို တစ်လကျော်လောက်စောင့်ကြည့်ခဲ့ပြီး ပြဿနာတွေတက်တဲ့ဒီနေ့မှာတော့ ထူးထူးခြားပဲ
သူတို့မိသားစုရဲ့ Alphad,Wish,Harrier2014,Hummer စတဲ့ကားတွေအကုန်လုံးပျောက်ခြင်းမလှပျောက်နေပါတယ်
ငွေလက်ခံတဲ့အချိန်မှာရှိခဲ့ကြတဲ့ VolunteerများAdminများကိုပါအခုချက်ချင်းရှာဖွေတိုင်ချက်ဖွင့်ကြပါ 🤨 🤨 🤨
JUDE JUDE နာမည်နှင့်ဖွင့်ထားတဲ့ဆိုင်တွေအားလုံးကိုလဲဒီနေ့ပိတ်ထားလိုက်ပါပြီ
ငွေသုံးဆယ်တိုးပေးရှယ်ယာခေါ်သော Jude Jude ထွက်ပြေးပြီ